I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Harold
ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Harold
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo leMidlalo yeBhola ekhatywayo enegama "IGinger Messi". Ibali lethu leHarvey Barnes yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokunyuka kweHarvey Barnes. Ikhredithi kwi-IG kunye ne-TheSun
Uhlalutyo lubandakanya ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yosapho, ibali lobomi ngaphambi kodumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubudlelwane, ubomi bomntu, iinyani zosapho kunye nendlela yokuphila.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungumfana onomdla ozele ukudlala imilingo. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biology yeHarvey Barnes enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
U-Harvey Lewis Barnes wazalwa ngomhla we-9th ka-Disemba 1997 kuyise uPaul Barnes kunye nonina ogama lakhe lingaziwa kwidolophu yaseBurnley, e-United Kingdom. Wayesisiqhamo sokuqala somtshato ophumelelayo phakathi kwabazali bakhe aboniswe ngezantsi.
Dibana no-Harvey Barnes Bazali. Ikhredithi kwi-IG
U-Harvey Barnes wakhulela kwimvelaphi yosapho olunobutyebi obuvela kubhola bebhola. Utata wakhe uPaul Barnes wayengumntu owayekade azimisele ukukhetha iBurnley FC njengasexesha lokuzalwa kwakhe.
U-Harvey Barnes wakhulela e-Countesthorpe, e-Leicestershire kunye nabantakwabo aboniswe ngezantsi. Ilali eNgilane ebekwe emazantsi eLeicester, kwaye malunga neekhilomitha ezintandathu ukusuka kwiziko ledolophu yaseLeicester.
UHarvey Barnes wakhula kunye nabantakwabo e-Countesthorpe, Leicestershire. Ikhredithi kwi-IG
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Imfundo kunye neBraduer Buildup
Kwi-2009, umzali kaHarvey Barnes wamfaka kwisikolo saseGreenfield apho wafumana ithuba lokudlala ibhola ekhuphisanayo. Wayephakathi kwamakhwenkwe anethamsanqa awamenyelwa kukhuphiswano lwebhola lebhola lezemidlalo iLeicestershire kunye neRutland School eyaziwa ngokuba yiThe Ilayisi Bowl. Olu khuphiswano lwambona ethatha inzala ukuba abe ngumdlali webhola webhola ofana nse notata wakhe.
Kwakunzima kuPaul Barnes ukujongana nomhlala-phantsi kwibhola kunye neHinckley United ngonyaka we-2005. Emva kokuthatha umhlala phantsi, uPawulos waqala ukuqeqesha unyana wakhe ukuze amncede aqhubeke nokuphila amaphupha akhe obuchule.
UHarvey Barnes wafumana inkxaso enkulu kuyise. Ikhredithi kwi-IG
Njengoko iLeicesterMercury ibeka, uHarvey Barnes wayephambene nebhola ekhatywayo ngeentsuku zakhe zobuntwana. Uza kuchitha iiyure kwigadi yosapho kunye notata wakhe, kwaye uyavuma ukuba ngebengenamzekelo ubalaseleyo njengoko wayexothisa iphupha lakhe lokuba yingcali.
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ubomi bokuqala
Umnqweno kaHarvey Barnes webhola ekhatywayo wambona egqitha izilingo kwimibala ebalekayo kwaye wamkelwa kwisikolo saseLeicester City eneminyaka elithoba. Ukuqonda umnqweno wonyana wakhe wokudlala ibhola yokuziphilisa wenza ukuba utata wakhe afundise unyana wakhe konke okufunekayo kuye ukuze aphumelele kwi-academy.
I-Harvey Barnes yokuQala iMinyaka yokuQala. Ikhredithi kwi-IG
UHarvey Barnes kwafuneka ancame izinto ezininzi. Ngamaxesha athile kuye kwafuneka aphulukane namatheko okuzalwa okanye izinto okhangele phambili ekhaya kunye nesikolo kuba nje egxile kwibhola ekhatywayo.
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Indlela eya kwiNdaba ibali
Amathuba eza njengoko uHarvey Barnes wayeqhubeka esenza inkqubela phambili kwizakhono zakhe. Kwiminyaka ye-18, wayekulungele ukushiya i-Leceister academy. Kwi-19 waqala ukudlala ibhola ephezulu kunye neklabhu emva kokuphumelela ibhaso leLeicester City Development squad Player of the Year: 2016-17.
IHarvey Barnes eneToulon indebe kunye nebhaso lokuphumelela. Ityala kwi Ilanga
UHarvey wathunyelwa ngeemali-mboleko kuMilton Keynes Dons apho waphumelela khona uMdlali oMncinci woNyaka (2016-17) kwisizini yakhe yokuqala. Oku kwalandelwa yi-Toulon Tournament yeGolide Boot kwi-2017.
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ukunyuka Kwidumo Ibali
UHarvey Barnes usaqhubeka nokuzibonakalisa kwimali mboleko eBarnsley & West Bromwich Albion apho afumane amanqaku amangalisayo wokulinga iklabhu yakhe yabazali ukuba aqalise ukukhumbula imali mboleko.
Nge-11 kaJanuwari 2019, uBarnes, kuba wayenomtsalane kakhulu wakhunjulwa yiLeicester ngokusebenza kwangoko. Emva kokubona umntwana wabo Kuthiwa xa wayelingwa ziiklabhu ezininzi eziphambili, uLeicester wagqiba kwelokuba amkhuphe isivumelwano seminyaka emihlanu. Emva nje kwekhontrakthi, xa kuvuka ixesha le-2019-2010, uBarnes waqala ukuhlawula iindleko zakhe. Wayephethe istudubolt sokubetha, injongo yeqela eliphikisayo. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina bevidiyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, abalandeli bebhola banokuba kwinqanaba lokuba babone umntwana osemtsha ekhula kwitalente ekumgangatho wehlabathi. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ekuveleni, abalandeli abaninzi baye baqala ukuzibuza ukuba uHarvey Barnes unomfazi okanye intombi. Emva kophando, sifumanise ukuba emva kwebhola ephumeleleyo, kukho intombi ebekekileyo emhle lomntu onguNaomi Dann. UHarvey noNahomi bobabini babengabathandi bobuntwana abakhula kunye baba ngabathandi.
Bobabini uHarvey Barnes noNahomi Dann babekhe baba ngabathandekayo bentsana. Ikhredithi kwi-IG
Ngelixa uHarvey waba ngumdlali webhola webhola ekhatywayo, intombi yakhe uNahomi yaba yimodeli yokomelela yomntu onesimo somzimba InFF, uphawu lokunxiba lase-UK elikhethekileyo kwisondlo nasekutyeni.
Kuba bobabini abathandi, ayisiyomsebenzi kuphela, kodwa ukuya eTurkey, iindlela zabo abazithandayo zehlobo. Umdlali wasesiswini ukhe wabelana ngesithombe esishwankathelayo kwiphepha lakhe le-IG apho abonakala ekonwabela ukonwaba iholide ene Jet ski nentombi yakhe eTurkey.
UHarvey Barnes uyakonwabela ukuqhuba i-Powerboat nentombi yakhe. Ikhredithi kwi-IG
UHarvey Barnes kunye nentombi yakhe uNahomi Dann basondelelene ishiyele esinye sezona zibini zisisiseko zeLeicester. Into yokuba bobabini abathandanayo bethandana okwethutyana ishiya ngaphandle kwamathandabuzo ukuba umtshato unokuba linyathelo elilandelayo elisemthethweni.
Dibana noHarvey Barnes Girlfriend. Ikhredithi kwi-IG
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ubomi bomntu
Yintoni eyenza uHarvey Barnes Tic?. Ukwazi ngakumbi iinyani malunga nobomi bakhe buqu ngaphandle kwesandi kunokukunceda ube nomfanekiso opheleleyo wobuntu bakhe.
Ukwazi uHarvey Barnes uBomi boBuntu kude nebhola. Ikhredithi kwi-IG
I-Harvey yindoda ezolile, epholileyo enokuthi ibe ne-eccentric kwaye inamandla kwibhida yokufezekisa iinjongo zakhe. Unobuntu obunamandla, obunomdla wokufuna ukwazi, kunye nobuntu obunomdla, ozimiseleyo ukuphila ubomi ngokupheleleyo. Xa uHarvey Barnes ubona into ethile engqondweni yakhe, wenza konke okusemandleni akhe ukufezekisa oku.
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Ulwazi lweentsapho
Amalungu osapho lukaHarvey Barnes ngoku bavuna izibonelelo zokufaka isimo sengqondo esinzima kokwabo.
U-Harvey Barnes Tata: UPaul Lance Barnes wazalwa ngomhla we-16th kaNovemba 1967. Wayekwangumdlali webhola ekhatywayo owayesisiNgesi owayedlala njengomdlali weqela lamaNgesi- IBirmingham City, Bury, Chesterfield, Doncaster Rovers, Huddersfield Town, Notts County, Stoke City kunye neJamani City. UPaul Barnes kwimpumelelo yakhe waphumelela imbasa enkulu yomntu kunye neklabhu ngexesha lakhe leentsuku zomsebenzi. Apha ngezantsi kukho ifoto yakhe njengoko wayephakamisa iYunivesithi yaseNew York Club Club ye-1994.
UPaul Barnes ngexesha lakhe lokudlala elisebenzayo
UPaul Barnes ophumeleleyo wambona egqiba ngokufumana amanqaku e-185 kwi-whpping ngaphambi kokuba unyana wakhe athathe indawo ukusuka apho ayeke khona.
U-Harvey Barnes Umama: Ngokungafaniyo nomyeni wakhe uPaul, umama kaHarvey uhlala ubomi babucala kunye nobomi obuphantsi nangona zininzi iindlela zokunxibelelana neendaba zentlalo. Apha ngezantsi kukho ifoto yakhe kunye nonyana wakhe uHarvey ngelo xesha wayeneminyaka eyi-16.
U-Harvey Barnes omncinci kunye nomama wakhe. Ikhredithi kwi-IG
UHarvey Barnes Ubhuti noDade: Ngokwifoto engezantsi, kubonakala ngathi uHarvey akazalwanga okuphela konyana ozalwa nosapho. Unomntakwethu kunye noodadewethu ababini.
UHarvey Barnes Siblings
YeHarvey Ukuzinikela ekuqinisekiseni ukuba bonke abantwana basekhaya bonwabile kuyafana nokuzibophelela kwakhe kwisandi.
UHarvey Barnes Oogogo: Ewe, ubuncinci bobabini bayaphila. Yintoni efunwa nguHarvey Barnes zezona zinto ziphambili azincedayo utatomkhulu wakhe. Amnika uthando olungenasiphelo kunye nentuthuzelo.
UHarvey Barnes kunye nomakhulu wakhe. Ikhredithi kwi-IG
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold yokuPhila
Kwilizwe lebhola ekhatywayo, ubotshelelwa kukubona abadlali bebhola bebonisa iimoto ezingaqhelekanga, izindlu ezinde kunye neengubo zokunxiba. Ukugweba ukusuka kwisithombe esingezantsi, kulungile ukuthi uHarvey Barnes yinto eqabulayo.
Ukuqonda i-Harvey Barnes indlela yokuphila. Ikhredithi kwi-IG
I-Harvey Barnes Ibali lokuKhula kobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Inyaniso engekho
Oyena mhlobo wakhe mkhulu: Bobabini bazalwa ngonyaka we-1997 kwaye ziimveliso zeLeicester academy apho i-bromance yabo iqale khona.
IHarvey Barnes enomhlobo osenyongweni uHamza Choudhury ngexesha lezifundo zabo zeminyaka
Isiganeko esaziwayo esenzeka ngonyaka awazalwa ngawo: Siqala ngalonto ibuhlungu. UDiana, iPrincess of Wales kunye nelungu losapho lwasebukhosini laseBritane baphulukana nobomi bakhe ngo-Agasti 1997. Malunga nenyanga ngaphambi kokuba azalwe uHarvey,Titanic"- Imiboniso bhanyabhanya ethandekayo, kunye nothando lwesihlanu oluphezulu kakhulu ngalo lonke ixesha luyakhululwa.
Iziganeko ezibini ezingalibalekiyo ze1997. I-Harvey Barnes Untold Iinyani. Ikhredithi kwi-Express kunye ne-NaGeo
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu leHarvey Barnes lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biold ye-Untold. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Iindaba zeTammy Abraham Childhood Plus I-Untold Biography Facts
Ingxelo kaDaniel Sturridge yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts